London Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: လန်ဒန်
နေအိမ် > လန်ဒန်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အချိန်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီ – သင်ရုံတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးပြီရှိမရှိ, သင့်ရဲ့နှစ်စဉ်အားလပ်ရက်ထွက်သည်ဦးတည်နေကြတယ်, သို့မဟုတ်မြေယာခရီးသွား၏သှေးဆောငျလွဲချော်မရနိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, သငျသညျရထားခရီးသွားဥရောပရွေးချယ်ပါတယ်. ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်အယူအဆင်, အားဖြင့်ခရီးထွက်မယ့်ခရီး…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားအားလုံးအချိန်အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်စီးရီးခဲ့ကြသည်. အဆိုပါဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားကနေမြင်ကွင်းများအတော်များများဟာလန်ဒန်သူ့ဟာသူအတွင်းသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြ. မင်းဟာဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်စီးရီးကိုသေသေချာချာဆွဲဆောင်ထားသူလား, လန်ဒန်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်မှာသေချာသည်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ နှင့်အချက်အပြုတ်အစဉ်အလာ - ဥရောပတစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၏အံ့သြဖွယ်အစည်းအဝေးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သောလူမြိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားဝိသေသလက္ခဏာရှိပါတယ်, အရာကကမ်းလှမ်းညာဘက်င်း၏သမိုင်းနှင့်အခြားအရာအားလုံးထဲသို့ဧည့်သည်များဆွဲယူ. ထိုအခါအချို့နိုင်ငံများရှိ, ကြောင်းကိုလည်းအရသာအချိုရည်ကိုဆိုလိုသည်! သူများ၏…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အဆိုပါမြင်ကွင်းများကိုမြင်ခရီးသွားလာတဲ့အကြီးအရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမဲ့သင်သာပျော်စရာရှိသည်ဖို့အဘယ်အရာကိုလိုလျှင်? ထိုကိစ္စတွင်, အကောင်းဆုံးကိုတွေကတော့နှင့်အတူမြို့ကြီးများရှိပါတယ်, နှင့်ရထားအဲဒီမှာရတဲ့လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ပါတီတိရစ္ဆာန်များအဘို့, အတော်လေးဘာမှမရှိဘူးပါပဲ…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ လမ်းပေါ်ကအနုပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကြီးများပိုပြီးလှပစေသည်အနုပညာထုတ်ဖော်ခေတ်မီပုံစံဖြစ်ပါသည်. A ကောင်းဆုံးလမ်းနံရံကိုလည်းလူမှုရေးအရအရေးကြီးသောဘာသာရပ်စဉ်းစားရန်သင့်အားလာအောင်နှိုးဆွသို့မဟုတ်ဂန္ထဝင်သခင်၏အကျင့်သင်သတိပေးစေခြင်းငှါ,. ဥရောပ၏မြို့ကြီးများနှင့်ပြည့်၏…
လန်ဒန်ခုနှစ်တွင်လုပ်ဖို့, ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်အကောင်းဆုံးအရာ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အခါဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့တော်သို့သွားရောက်ခြင်းမှကြွလာ, လန်ဒန်တိုင်းခရီးသွားဧည့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်း၏ထိပ်မှာသခြောသည်နှင့်လုပ်ပါရန်အများအပြားအရာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ရှိပါတယ်. ဒါဟာတာရှည်တယ်ရဲ့, စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း; လှပသောအထင်ကရအဆောက်အနှင့်မြင်ကွင်းများ; နှင့်အရာအများကြီးရှိပါတယ်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပတိုက်ကြီးအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဥရောပခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်း - ပါဝင်သည်အရသာကိုက်. ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးအများဆုံးနှစ်သက်သောပါလိမ့်မည်? အဘယ်အရာကိုမုန့်ညက် pic ကိုသင်၏ Instagram ကို 100 ရဲ့အကြိမ်တက် racking ရပါလိမ့်မယ်? အံ့သြရပ်တန့်ခြင်းနှင့် munching စတင်ရန်….